ICOVID ISESEYINGOZI KUSHO INDODA ENGCWABE ABANTU ABANGAMA-44 NGEZINSUKU EZINE | Scrolla Izindaba
ICOVID ISESEYINGOZI KUSHO INDODA ENGCWABE ABANTU ABANGAMA-44 NGEZINSUKU EZINE
UOdwa Duru ungomunye wabangcwabi abahamba phambili kuMasipala wase-Nelson Bay kanti uyakhala uma ebona ukuthi bangaki abantu abangcwatshwa nsuku zonke.
Ezinsukwini ezine phakathi koMgqibelo noMsombuluko, wangcwaba abantu abangama-44 kwathi ngoLwesibili, le nhlekelele yaba ngeyakhe.
Kulezi zisulu kubalwa nonina uNomtu Duru ushone ngenxa yigciwane eneminyaka engama-64.
“Umama ubephilile futhi ayikho imishwanguzo ayeyisebenzisa. Kodwa ezinyangeni ezimbili ezedlule uthe ukhathazekile ngegagasi lesibili njengoba ebesebenza ehhotela,” uyasho.
UOdwa qobo usindile kuleli gciwane.
“Ngisinde ku-Covid-19 kulo nyaka kanye nabasebenzi bami abayisikhombisa. Kodwa indlela abantu abaziphatha ngayo manje ingenza ngikhathazeke,” uyasho.
Uthe yize abantu ebangcwabe ngempelasonto bebadala, ufuna ukuxwayisa intsha.
“Shintsha indlela oziphatha ngayo. Leli gciwane akuyona ihlaya,” uyasho.
Uthe izindawo zokucima ukoma, amashibhini, amaphathi kanye nemicimbi yokuzijabulisa yizona ndawo ezisabalalisa kakhulu igciwane.
“Abashisekeli bayacabuzana bayangana futhi bayathintana uma bedakiwe. Amanye amashubhini agcwela ngokweqile futhi abantu abasazigqokile izifonyo. Akusekho ukuqhelelana. Baze babelane ngogwayi,” kusho uOdwa.
“Ngeke siyinqobe i-Covid-19 inqobo nje uma abantu bengazigqokile izifonyo zabo, bangahlambi izandla, noma baziqhelelanise nabantu futhi bahlale ekhaya.”
NgoLwesibili, ngokusho kukaNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize, iNingizimu Afrika ibe nabantu abasha abayi-1,987 abanegciwane le-corona.
Sebebonke bayizi-20 433 abantu abashonile kuze kube manje besuka kwabayi-754 256 kanti abaqinisekisiwe ukuthi banegciwane bayizi-110 312 e-Eastern Cape. Kusinde abantu abayizi-696 820.
Ngabantu abayizi-231,860 okuqinisekisiwe ukuthi banegciwane, i-Gauteng inesibalo esiphezulu sokutheleleka ezweni lonke.
UProfesa uSteven Friedman, ebhala ngokuzibandakanya kwakhe kwi-Democracy Development Programme uthe noma ngubani obheka impikiswano yaseNingizimu Afrika kwabezindaba angaxolelwa ngokucabanga ukuthi i-Covid-19 ayiseyona inkinga, kodwa izibalo zansuku zonke zixoxa indaba ehlukile.
Ezinsukwini eziningi, kubikwa abantu abasha abayizi-2 000 nokwedlula emhlabeni kwabantu abambalwa. Ngakho-ke, akulona igciwane elisendleleni, intshisekelo yalo kuphela phakathi kwalabo abakha impikiswano kazwelonke.